စစ်ကောင်စီရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အသစ် ပြောဆိုချက် NLD ကန့်ကွက် — မြန်မာဌာန
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ လှည်းတန်းလမ်းဆုံတွင် စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်သူ ပြည်သူများ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေစဥ်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ပျက်ပြယ်သွားပြီလို့ စစ်ကောင်စီကခန့်အပ်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အသစ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစိုးရဲ့ ပြောကြားချက်ကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။
ဦးသိန်းစိုးရဲ့ ပြောဆိုချက်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်အသိအမှတ်ပြုဖို့ တနိုင်ငံလုံးမှာ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုနေသူတွေရဲ့ သဘောထားဆန္ဒကို လျစ်လျူရှု စော်ကားလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ NLD က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက် ဒီကနေ့ ညနေပိုင်းမှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက နိုင်ငံတော်ရဲ့ အာဏာသုံးရပ်ကို ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့အတွက် အရင်ကရှိခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်တွေနဲ့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာ ပျက်ပြယ်သွားပြီလို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သစ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစိုး က ဒီကနေ့ နေပြည်တော်အစည်းအဝေးမှာပြောခဲ့တာပါ။
NLD ဘက်ကတော့ စစ်တပ်ဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေက အစိုးရလို့ တရားဝင်လက်ခံထားတာ မဟုတ်တဲ့ အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုသာ ဖြစ်တာကြောင့် စစ်ကောင်စီက ဖွဲ့ထားတဲ့ကော်မရှင်ဟာ တရားမဝင်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့လုပ်ရပ်ဟာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ကျော်လွန်တဲ့လုပ်ရပ်လို့လည်း NLD က ထပ်မံပြောဆိုပါတယ်။
ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ စစ်အာဏာသိမ်းကောင်စီရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ တွေ့ဆုံပွဲကို ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့ မိတ်ဖက်ပါတီတွေအပါအဝင် ပါတီပေါင်း ၅၃ ပါတီ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး NLD၊ SNLD တို့အပါအဝင် နိုင်ငံ‌‌ရေးပါတီ ၃၈ ပါတီမတက်ရောက်ခဲ့ပါဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD က မဲဆန္ဒနယ် ၉၂၀ မှာ မဲအများဆုံးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပြီး၊ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက မဲဆန္ဒနယ် ၇၁ နေရာနဲ့ ဒုတိယ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD က မဲဆန္ဒနယ် ၄၂ နေရာနဲ့ တတိယ၊ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီက ၁၅ နေရာနဲ့ စတုတ္ထ၊ တအောင်း (ပလောင်) အမျိုးသား ပါတီက မဲဆန္ဒနယ် ၁၂ နေရာနဲ့ ပဉ္စမမြောက် မဲအများဆုံး အသီးသီး အနိုင်ရခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
We do not recognize military of UEC's chairman Soe Thein who is not appointed by the people.
These parties are not represented for among of people. That is why we rejected their issue and statement.